National Power News:: अमेरिकी कूटनीतिज्ञमाथि चीनमा के भइरहेको छ ? National Power News:: अमेरिकी कूटनीतिज्ञमाथि चीनमा के भइरहेको छ ?
अमेरिकी कूटनीतिज्ञमाथि चीनमा के भइरहेको छ ?
१० जेठ, काठमाडौं – अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चीनमा रहेका आफ्ना जनतालाई असामान्य आवाज र दृश्यका लागि सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।चीनमा कार्यरत एक अमेरिकी नागरिकमा देखिएको रहस्यमयी लक्षणपश्चात् विदेश मन्त्रालयले उक्त चेतावनी जारी गरेको हो । ती व्यक्तिले सुक्ष्म र अस्पष्ट तर असामान्य आवाज र दबाबको अनुभव गरिरहेको बताएका थिए ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोका अनुसार उक्त घटना क्युबामा अमेरिकी कूटनीतिज्ञमाथि गरिएको कथित ‘सोनिक अट्याक’ सँग मेल खान्छ । चीनले यसबारे निकै जिम्मेवार ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध केही समययता खराब बताइएको छ र दुबै देशबीच ‘ट्रेड वार’ को आशंका छ । विदेशमन्त्रालयले उक्त घटनालाई निकै गम्भीरताका साथ लिइरहेको बताएको छ । यद्यपी, अमेरिकाले यसका लागि चीनमा कुनै आरोप लगाएको छैन ।
अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता जिनी लीका अनुसार कर्मचारीले ग्वांगजोऊ शहरमा सन् २०१७ को अन्तिम र अप्रिल २०१८ का बीच विभिन्न प्रकारका शारिरिक विकृतीको सामना गर्नुपर्यो । त्यसपछि कर्मचारीलाई अमेरिका फिर्ता पठाइयो । १८ मे मा अमेरिकी दूतावासलाई थाहा भयो कि कर्मचारी मानसिक रोगी थिए । लीले भने, ‘हामीले हाम्रो जनतालाई संदिग्ध आवाज वा प्रकाशको सामना गरे त्यसको विपरित दिशातर्फ जान आग्रह गरेका छौं । ’
यस्तो प्रकारको संदिग्ध घटना क्यूबाको राजधानी हवानामा अमेरिकी कूटनीतिज्ञसँग पनि भएको थियो । तब यसलाई सोनिक हमला भनिएको थियो । पोम्पियोले हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभमा विदेशी मामलाका समितीलाई उक्त घटना क्यूबाको सोनिक हमलाजस्तै भएको मेडिकल अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको जानकारी दिए । यसका लागि मेडिकलको एक समूहलाई पठाइएको जानकारी दिए । पोम्पियोले भने, ‘हामी क्यूबा र चीन दुबै स्थानमा वास्तविकता पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।’